Neural processing of reward in adolescent rodents (XNUMX) - Your Brain On Porn
ဆယ်ကျော်သက်ကြွက် (2014) တွင်ဆုလာဘ်၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့
Dev Cogn Neurosci. 2014 နိုဝင်ဘာ 22. pii: SXNUMX-XNUMX(XNUMX)XNUMX-XNUMX. doi: XNUMX/j.dcn.XNUMX.
Simon NW1, Moghaddam B ကို2.
Current research on psychiatric disorders has placedastrong emphasis on early detection and treatment. Many symptoms of schizophrenia, mood disorders and addiction first manifest during the adolescent period (Adriani and Laviola, XNUMX, ကာဇီ et al ။ , 2008, Schramm-Sapyta et al., XNUMX နှင့် မစ်ချယ်နှင့် Potenza, 2014). Accordingly, it is critical to elucidate the biological and environmental risk factors that render adolescents highly vulnerable to these disorders. Such mechanistic knowledge is necessary for the development of interventions to prevent or attenuate the emergence of disease.
Previous preclinical research on brain development and disease has primarily assessed morphological changes or alterations at the receptor level. These studies have yielded critical information about adolescent biology and behavior. There is little known, however, about real-time dynamics of neuronal activity during behavior. This information is particularly relevant in light of recent theories positing that dysfunctional neuronal network activity isacritical contributor to the etiology of disease (Uhlhaas and Singer, XNUMX နှင့် Moghaddam and Wood, XNUMX). To fully understand how behaviorally relevant neuronal network activity is altered in vulnerable individuals, we must first understand how individual neurons and neural ensembles encode salient events in healthy adolescents and adults.
Changes in affect, motivation, and motivational processing during adolescence are among the first observed behaviors predictive of schizophrenia and other psychiatric illnesses in high risk individuals (Ernst et al ။ , 2006, Gladwin et al., XNUMX နှင့် Juckel et al., XNUMX). To understand the development of symptoms during this vulnerable developmental period, it is essential to quantify the basic neural mechanisms underlying adolescent reward processing. Recent data accumulated in our lab using adolescence rats suggest substantial age-related differences in reward-induced neuronal activity. These differences are manifested even when (XNUMX) measurable behavior is equivalent between adolescent and adult subjects, and (XNUMX) baseline levels of neuronal activity are equivalent between age groups. Thus, reward-evoked neuronal activity may, in some instances, be more effective than behavioral measures of motivation or baseline activity asamarker of early vulnerability to disease. In this review, we summarize adolescent reward-processing data acquired fromarat model across multiple brain regions, and discuss the implications of these differences for adolescent behavior and disease vulnerability.
XNUMX. Adolescent reward processing differs from adults across multiple regions
The technique focused in this review is single-unit extracellular recording where neuronal activity of multiple neurons can be measured in real-time in behaving animals (Sturman and Moghaddam, XNUMXb). For this method, multiwire electrode arrays are implanted in specific brain regions and electrical signals are amplified and high pass filtered to isolate high frequency neuronal activity, such as action potentials or local field potential oscillations (Buzsaki, XNUMX, Sturman and Moghaddam, XNUMXb နှင့် Wood et al., XNUMX). Measuring neural activity in awake-behaving adolescent rats isachallenging endeavor, as the adolescent window only spans approximately between postnatal days XNUMX–XNUMX (လှံ, 2000). After accounting for the required time for electrode implantation surgery, recovery and habituation, the brief remaining time window precludes the use of complex behavioral paradigms with electrophysiology. Therefore, behavioral tasks that do not require long training times must be used to measure reward processing in adolescent rats. Our lab utilizesarewarded instrumental task in which rats learn to nose poke intoalit port to receiveasingle sugar pellet, while neural activity is recorded from electrode arrays implanted into specific brain regions (သဖန်းသီး။ 1). Importantly, the task is simple enough that learning and performance of the primary components of the task are comparable between adults and adolescents (Sturman et al., XNUMX), thus any differences in neuronal activity are indicative of reward processing differences, rather thanaproduct of behavioral asymmetry between groups. Each of these behavioral events can be synchronized with measures of neural activity with sub-second long temporal resolution, allowing assessment of neural activity associated with reward-related cues, goal-directed actions, and reward anticipation and delivery. Using variants of this task, we recorded from orbitofrontal cortex, dorsal and ventral striatum, and ventral tegmental area in adult and adolescent rats. We then discuss how these differences in reward-processing may be related to reward-related cognitive traits observed during adolescence, including impulsivity, risk taking and behavioral flexibility.
(က) လူပျိုယူနစ် electrophysiology ဆုလာဘ်-related အပြုအမူစဉ်အတွင်းနိုး-ပြုမူဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များနှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ကြွက် microwire Array ကိုအတူကိုထညျ့သှငျးကာနှာခေါင်း Poke ဆိပ်ကမ်းကို, သကြားတောင့်ဆုလာဘ်ကိုအပ်ကြောင်းအစားအသောက်ကျင်းနှင့်ဆုလာဘ်ရရှိနိုင်မှုအချက်ပြတဲ့ cue အလင်းတပ်ဆင်ထားကာအော်ပရေတာခနျးထဲသို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ cue ၏ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ဦးအလင်းတစ်သေံ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး၏ပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးဝင်း cue ခဲ့ကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ (ခ) အသုံးပြုသွားမည်တန်ဆာလုပ်ငန်းများကိုတစ်ဦးနှာခေါင်း-ပြီးမှ (အရေးယူဆောင်ရွက်မှု) ၏ထားတဲ့ကာလအတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်, အလငျး cue ၏ illumination နှင့်အတူစတင်ခဲ့တဲ့တောင့်ဆုလာဘ်များပေးပို့စေ၏။ ကြွက်အကျိုးကိုကောက်ယူပြီးနောက်တစ် variable ကိုကြားရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလအစပျိုးခဲ့သည်, ထို့နောက်နောက်တစ်ကြိမ်စမ်းသပ်မှုစတင်ခဲ့သည်။ (ဂ) ဤသည်အပူကြံစည်မှုအကျိုးကို-ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်မှတစ်ဦးချင်းစီတွင် neuron များ၏ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုသရုပ်ပြနမူနာ data တွေကိုပြသထားတယ်။ အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ဖြစ်ရပ် (အောက်ခြေ) ပတျဝနျးကငျြတိုးမြှင့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုသရုပ်ပြ, အခြားသူများဖြစ်ရပ် (ထိပ်) စဉ်အတွင်းနှိမ်နင်းပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုသရုပ်ပြနှင့်အခြားသူများ (အလယ်) တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြသည်။
2.1 ။ Prefrontal cortex
Prefrontal cortex (PFC) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးသိသိသာသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာခြင်းကိုသည်းခံ, ဤဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း (ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူသဘောထားတွေအတွက်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်တားစီးဖို့အထူးသဖြင့်စွမ်းရည်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးBrenhouse et al ။ , 2010, Geier et al ။ , 2010, Sturman နှင့် Moghaddam, 2011a နှင့် Ernst, XNUMX). PFC is divided into multiple functionally distinct subregions with different implications for adolescent behavior and disease vulnerability. Orbitofrontal cortex (OFC) isalateral prefrontal-cortical region that receives input from sensory regions and is extensively connected with limbic areas (စျေး, 2007 နှင့် Rolls and Grabenhorst, XNUMX). Accordingly, OFC is ideally suited to integrate physical aspects of rewarding and aversive outcomes with emotional information, and then utilize this affective information to guide behavior. Neuronal activity in OFC has been associated with the representation of rewarding outcomes (van Duuren et al., XNUMX, Balleine et al ။ , 2011 နှင့် Schoenbaum et al., XNUMX), and has been implicated in multiple facets of impulsive behavior (Berlin et al., XNUMX, Winstanley et al ။ , 2010 နှင့် Zeeb et al., XNUMX), which is elevated in humans and rats during adolescence (အစိမ်းရောင် et al ။ , 1994, Adriani and Laviola, XNUMX, Burton and Fletcher, XNUMX, Doremus-Fitzwater et al ။ , 2012 နှင့် မစ်ချယ်နှင့် Potenza, 2014). Because OFC (along with other prefrontal regions) has been shown to be underdeveloped in human adolescents (Sowell et al ။ , 1999 နှင့် သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006), OFC isalogical target for probing for age-related differences in reward processing.
Single unit extracellular recording was used to measure task-evoked activity in individual neurons. In adults, OFC population neuronal activity decreased during reward retrieval (သဖန်းသီး။ 1B). In contrast, the adolescent OFC population activity was increased during retrieval (Sturman and Moghaddam, XNUMXb). This profound difference in activity occurred despite similar baseline firing rate between groups, and comparable neuronal inhibition during the performance phase of the instrumental action that lead to reward delivery. These data suggest that reward processing in OFC can be an effective biomarker of age-related differences, even when baseline neuronal activity and behavior are equivalent between groups.
Although baseline firing rate was similar between age groups, an alternate analysis of firing patterns revealed further distinctions. Adolescent OFC showed increased variability compared to adults in firing rate across multiple trials, as assessed by fano factor, which providesameasure of normalized variability and can be calculated by ross-trial variance by cross-trial mean (Churchland et al., XNUMX). This variability may be indicative of inefficient neural coding of reward-related events, as spike variability undermines effective inter-regional communication through spike-field coherence (Fries, XNUMX နှင့် Churchland et al., XNUMX). Importantly, this finding suggests that measures beyond simple firing rate may be necessary to detect functional differences in neural processing between age groups, and possibly between healthy controls and diseased or at-risk patients.
OFC playsamodulatory role in impulsive choice, defined asapreference for immediate rewards/gratification (Winstanley, XNUMX). Adolescent humans and rats have increased preference for immediate gratification compared to adult humans and rats, and this has been implicated in adolescent drug abuse and maladaptive behavior (Adriani and Laviola, XNUMX, Doremus-Fitzwater et al ။ , 2012, မစ်ချယ်နှင့် Potenza, 2014 နှင့် Stanis and Andersen, XNUMX). Impulsive decision-making is associated with several psychiatric disorders (Bechara et al ။ , 2001, Ahn et al., XNUMX နှင့် Nolan et al., XNUMX), and is bothapredictor of drug abuse andaconsequence of long-term exposure to drugs of abuse (ရှိမုနျကို et al ။ , 2007, Perry et al., XNUMX, Anker et al., XNUMX, de Wit, XNUMX နှင့် Mendez et al., XNUMX). Thus,afeed forward condition may develop in which individuals with psychiatric vulnerabilities involving aberrant impulsive regulation are highly likely to abuse drugs, which then exacerbates trait impulsivity (Garavan နှင့်ရဲရငျ့စှာပွော, 2005 နှင့် Setlow et al ။ , 2009) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ OFC ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်နှောင့်နှေး (အကြောင်းသတင်းအချက်အလက် encodes အဖြစ် Impulse အတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားမှု, စိတျအပိုငျး၌, OFC အတွက်အာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုRoesch နှင့် Olson, 2005 နှင့် Roesch et al ။ , 2006) ။ အလုပ်တခုကိုစွမ်းဆောင်ရည် (fano အချက်အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်) နှင့်ဆယ်ကျော်သက် OFC အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ hyperactive ဆုလာဘ်-evoked တုံ့ပြန်မှုတစ်လျှောက်လုံးအဆိုပါအလွန်အမင်း variable ကိုအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ထို့ကြောင့်ဆုလာဘ်-related ဖြစ်ရပ်များ၏မတည်မငြိမ်ကိုယ်စားပြုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာရေးကိုလည်းလုပ်ရပ်များနှင့်ရလဒ်အကြားရှည်လျားနှောင့်နှေးပေါင်းကူးတစ်ခု suboptimal နိုင်စွမ်း, OFC အာရုံခံတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ function ကို (ဆက်စပ်သောမည်အကြောင်း,Roesch et al ။ , 2006) ။ ဤသည်အလှည့်အတွက်နှောင့်နှေးဆန္ဒပြည့်ကျော်ချက်ချင်း၏ persistent ရွေးချယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့လိမ့်မယ်။
အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားမှုကိုလည်းအမူအကျင့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ချက်, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုတားစီး (များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသော medial PFC ၏ infralimbic နှင့် prelimbic ဒေသများတွင်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်Goldman-Rakic, 1995, Fuster, 2001, Killcross နှင့် Coutureau, 2003, Magno et al ။ , 2006, ပီတာ et al ။ , 2008, Burgos-Robles et al ။ , 2013 နှင့် Pezze et al ။ , 2014) ။ အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုသေးဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များပြုမူတွင်ဤဒေသများတှငျမှတျတမျးတငျထားသနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေနေစဉ်, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇ quantifying အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြသည်။ ပြီးနောက်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေး, မြီးကောင်ပေါက် (ရှာကြံမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များကဆယ်ကျော်သက် medial PFC ၏လျှော့ချ activation ၏ညွှန်ပြ, လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ prelimbic နှင့် infralimbic cortical အတွက် Fos အပြုသဘောအာရုံခံတစ်ခု attenuation တိုးပြသခဲ့သည်ဒိုဟာဆီ et al ။ , 2013) ။ နီကိုတင်း-evoked လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများ (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ medial PFC နှိုင်းယှဉ် Arc အတွက်ပိုကောင်းတိုးသို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်အတွက် cfos အလားတူအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်စေသရုပ်ပြ, ကွဲလွဲနေကြသည်Leslie et al ။ , 2004 နှင့် Schochet et al ။ , 2005) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကင်းထိတွေ့မှု (ဆယ်ကျော်သက် PFC အတွက်က c-fos စကားရပ်ကိုတိုးမြှင့်စေသောCao et al ။ , 2007) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေအသုံးဝင်သောဒေတာများကိုနေစဉ်, ဆယ်ကျော်သက် medial PFC အတွက်မူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာဆုလာဘ်နှစ်ဦးစလုံး၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့တိုက်ရိုက်တိုင်းတာဆယ်ကျော်သက် medial PFC function ကိုအကြောင်းကိုယာယီတိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်လိုက်လျောပါလိမ့်မယ်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း prelimbic cortex ထိပ်မှာရှိတဲ့ Dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ် (Andersen က et al ။ , 2000) ။ D1 dopamine receptors, အထူးသဖြင့်, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလှုံ့ဆော်အပြုအမူချိတ်ဆက်ပြီ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်တွေကိုတိုးမြှင်အားနည်းချက်သရုပ်ပြLeslie et al ။ , 2004, Brenhouse နှင့် Andersen က, 2008, Brenhouse et al ။ , 2008 နှင့် Kota et al ။ , 2011); ဆယ်ကျော်သက် prelimbic cortex အတွက် D1 receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ဤတွေကိုမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေ (Brenhouse et al ။ , 2008) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ prelimbic cortex အတွက် overexpressing D1 receptors (မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုမှ Impulse နှင့်တိုးမြှင့် sensitivity ကိုအပါအဝင်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူသဘောထားတွေကို, recapitulatedSonntag et al ။ , 2014) ။ D1 အဲဒီ receptor ကိုင်တွယ်ကိုလည်း (အရွယ်ရောက်သူထက်မြီးကောင်ပေါက်တစ် သာ. ကြီးမြတ်ဒီဂရီမှစိတ်ကြွဆေးမှအမူအကျင့် sensitivity ကို modulatesMathews နှင့်မက်ကော်မစ်, 2012).
2.2 ။ Striatum
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုး (ထို striatum ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါသည်Sowell et al ။ , 1999, Ernst et al ။ , 2006, ကာဇီ et al ။ , 2008, Geier et al ။ , 2010 နှင့် Somerville et al ။ , 2011) ။ Striatum (သင်ယူမှု, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်သည် ဖြစ်. , ပြင်းပြင်းထန်ထန် schizophrenia နဲ့စွဲအပါအဝင်စိတ်ရောဂါမမှန််ပတ်သက်နေထားပြီးKalivas နှင့် Volkow, 2005, Everitt et al ။ , 2008 နှင့် Horga နှင့်ဗြ Dargham, 2014) ။ ventral နှင့် dorsal နှစ်ဦးစလုံး striatum အဆိုပါ midbrain ကနေသိပ်သည်း dopaminergic စီမံချက်များခံယူခြင်း, dopamine ဂီယာထပ်တလဲလဲ (လူကြီးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားကွဲပြားပြထားပြီးAdriani နှင့် Laviola, 2004, Volz et al ။ , 2009 နှင့် McCutcheon et al ။ , 2012) ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အကြား striatum အတွက် neuroanatomical နှင့် pharmacological ကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးဥစ္စာဓနရှိစဉ်အခါ (Andersen က et al ။ , 1997, Bolanos et al ။ , 1998 နှင့် Tarazi et al ။ , 1998), အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအတွင်းအသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြသိသိသာသာလျော့နည်းဒေတာရှိပါတယ်။ လူ့ဆယ်ကျော်သက်ဘာသာရပ်များအတွက်ဖျော်ဖြေသည့်အာရုံကြောပုံရိပ်လေ့လာမှုအများစုလှုံ့ဆျောမှု, လေ့လာသင်ယူမှုနှင့် cue အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသောအထူးသဖြင့်နျူကလီးယပ် accumbens (NAc), (အတွင်း ventral striatum (VS) အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြRobbins နှင့် Everitt, 1996, ကယ်လီ, 2004, Ernst et al ။ , 2006, သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006, Geier et al ။ , 2010 နှင့် ဟတ် et al ။ , 2014) ။ သို့သော်သင်ယူမှု, action ကို-ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အလေ့အကျင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း (များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသော, dorsal striatum (DS),Packard နဲ့အဖြူရောင်, 1990, Balleine et al ။ , 2007 နှင့် Kimchi et al ။ , 2009), အဓိကအားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုတစ် locus အဖြစ်သတိမမူခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံး striatal ဒေသများတွင်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အာရုံကြောဆက်စပ်များကိုတွက်ချက်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်, ငါတို့ဓာတ်ခွဲခန်းရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူစဉ်အတွင်း DS နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏ NAc နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် Single-ယူနစ် extracellular လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
အတန်ငယ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, NAc အတွက်တာဝန်-evoked လှုပ်ရှားမှု (အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်အကြားသိသိသာသာကွာခြားခဲ့ပါဘူးSturman နှင့် Moghaddam, 2012) ။ ကြံ့ခိုင်အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားမှု, သို့သော်, DS အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအာရုံခံအရေးယူပြီးစီး (အပြီးသည်အထိကိုတုံ့ပြန်ဘူးသော်လည်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအာရုံခံရုံကြိုတင်အကျိုးကို-ရှာကြံရုန်းကန်လှုပ်ရှားရန် activated ခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 1B က) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအာရုံခံဆုလာဘ်များက inhibited စဉ်တွင် DS အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအာရုံခံလည်း (ပြန်လည်ရယူခြင်းဆုချဖို့ကြိုတင် activated ခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 1B က) ။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်နှစ်ခုလုံးကိုအစောပိုင်းကနှင့်ဆုလာဘ်-ပြန်လည်ရယူခြင်းစဉ်အတွင်းလူကြီးများထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘွဲ့မှ DS circuitry စုဆောင်းလေ့ကျင့်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
ဆယ်ကျော်သက် DS အာရုံခံ Hyper-တုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်ဖြစ်ကြောင်းနေစဉ်, စိတ်ကြွဆေး-evoked dopamine လွှတ်ပေးရန်ဤဒေသတွင်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ attenuated ဖြစ်ပါတယ်။ အနိမ့်သည့် DS အတွက်စိတ်ကြွဆေး-evoked dopamine efflux ၏အဆင့်ဆင့်, ဒါပေမယ့်, တဖနျမဟုတျဘဲလူကြီးများ (နှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များ၏ NAcMatthews က et al ။ , 2013) ။ စိတ်ဝင်စားစရာဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ DS နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပိုမို dopamine efflux ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ထိုကဲ့သို့သောကင်းနှင့် methylphenidate အဖြစ်လွှာမှ inhibitors အဖြစ်ပြုမူကြောင်း dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ, အတူလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Walker ကနှင့် Kuhn, 2008 နှင့် Walker က et al ။ , 2010) ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူအမျှ, ဒီအသက်အရွယ်-related ကင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု (NAc ထက် DS မှာပိုသိသာခဲ့သည်Frantz et al ။ , 2007 နှင့် Walker ကနှင့် Kuhn, 2008) ။ အဆိုပါ synapses အတွက် dopamine ထိန်းသိမ်းရန်ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘွဲ့မှ DS dopamine လွှတ်ပေးရန်အကြားဒါဟာကွာခြားချက် projection dopamine အာရုံခံအတွက်လျှော့ချ dopamine ရရှိနိုင်မှုဖွယ်ရှိ (ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးကဲ့သို့) dopamine လွှတ်ပေးရန်လွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုအဖြစ်, အခြေခံ dopamine ရရှိနိုင်မှု၏ function ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ (ထိုကဲ့သို့သော ) ကိုကင်းအဖြစ်။ ထို့ကြောင့် tyrosine hydroxylase, dopamine များ၏ပေါင်းစပ်နှင့်အတူပါဝင်ထားတဲ့အင်ဇိုင်း, (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို DS သော်လည်းမ NAc အတွက်လျှော့ချခဲ့သည်Matthews က et al ။ , 2013) ။ evoked-dopamine neurotransmission ၌ဤလျှော့ချရေး (substantia nigra ပိုဒျ compacta အထဲကပေါ်ထွန်းရာ DS ကို dopamine Project, အကြံပြုUngerstedt, 1971 နှင့် Lynd-Balta နှင့် Haber, 1994), မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း hypoactive ဖြစ်နိုင်သည်။ Dopamine (ထို striatum အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံတခုတခုအပေါ်မှာ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်Kreitzer နှင့် Malenka, 2008) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် DS အတွက်တစ်ဦးက hypoactive dopamine neurotransmission, ဒါကြောင့်, DS အာရုံခံ၌အကြှနျုပျတို့၏လေ့လာတွေ့ရှိတိုးမြှင့်ဆုလာဘ်-evoked လှုပ်ရှားမှုအထောက်အကူပြုပေမည်။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက် DS မှ dopamine စီမံကိန်းများမှမှတ်တမ်းတင်အနာဂတ်လေ့လာမှုများတိုက်ရိုက်ဒီယန္တရားဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။
အစဉ်အလာတွေကိုနှင့်ဆုလာဘ်မှတန်ဖိုးနှင့်လှုံ့ဆျောမှု attributing နှင့်ဆက်စပ် striatum ၏ဧရိယာ (VS ဖြစ်ပါသည်Robbins နှင့် Everitt, 1996, ကယ်လီ, 2004, Cooper ကနှင့် Knutson, 2008 နှင့် Flagel et al ။ , 2011) ။ ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက် circuitry ၏ထစ်အငေါ့ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူများနှင့်တုန့်ပြန်ပေါ်ဆယ်ကျော်သက်နာမကျန်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအားနည်းချက်ပတ္တာ၏ညီ, များစွာသောသီအိုရီ (Bjork et al ။ , 2004, သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006, Geier et al ။ , 2010 နှင့် ဗန် Leijenhorst et al ။ , 2010) ။ ယခင်အချက်အလက်များ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, (ဆုလာဘ်မှအသက်-related ကွဲပြားခြားနားမှု DS အတွက် ပို. ပင်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုSturman နှင့် Moghaddam, 2012 နှင့် Matthews က et al ။ , 2013) ။ ဤအဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအမူအကျင့်များနှင့်ရောဂါအားနည်းချက်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ VS ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးနေစဉ်, သူတို့ DS လည်းဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူသဘောထားတွေကိုအတွင်းကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ DS ပြင်းပြင်းထန်ထန်သင်ယူမှုနှင့်ခေါငျးအပြုအမူများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်ထွန်းခြင်း (နှင့်ဆက်စပ်နေသည်Robbins နှင့် Everitt, 1992, Packard နဲ့ Knowlton, 2002 နှင့် Gittis နှင့် Kreitzer, 2012) ။ DMS ၏တွေ့ရှိရပါသည်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ၏သင်ယူမှုနှင့်စကားရပ်များကိုဖျက်ပယ်အဖြစ်အထူးခုနှစ်တွင် DS ၏ dorsomedial striatum (DMS), သို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ striatum ဒေသ (ရလဒ်များဆုချီးဖို့လုပ်ရပ်တွေကိုချိတ်ဆက််ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ယဉ်များနှင့် Knowlton, 2004 နှင့် Ragozzino, 2007), နှင့် DMS လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း (ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တုံ့ပြန်မှုပုံစံများ၏ encoding က်ပတ်သက်နေထားပြီးKimchi နှင့် Laubach, 2009) ။ လုပ်ရပ်တွေကိုမရှိတော့ရလဒ်ကိုကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်မှီခိုနေကြရသောကာလအတွင်းပြောင်းပြန် dorsolateral striatum (DLS) (, လေ့အပြုအမူများစုစည်းပြီးနှင့်စကားရပ်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်ယဉ် et al ။ , 2004 နှင့် ယဉ် et al ။ , 2009) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်အသေးစိတ်အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏လေ့လာမှုများနှင့် dopamine လွှတ်ပေးရေး (Sturman နှင့် Moghaddam, 2012 နှင့် Matthews က et al ။ , 2013) နှစ်ဦးစလုံးဟာဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူ phenotype နှင့်နာမကျန်းအားနည်းချက်ဆီသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဤဒေသ၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေး DMS မှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီခဲ့သည်။ ဒီအယူအဆနှင့်အညီ, အတော်ကြာကွဲပြားခြားနားမှုမြီးကောင်ပေါက်အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်ကွဲပြားမှုအပါအဝင်ဆာပအပြုအမူအတွက်ကွဲပြားမှု, သရုပ်ပြအတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်အကြားနျဆာပအပြုအမူအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကြ, မျိုးသုဉ်း, attenuation တုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့် action- ပြောင်းလဲမှုများမှထိန်းညှိဖို့ချို့ယွင်းနိုင်စွမ်းလျှော့ချ ရလဒ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ် (Friemel et al ။ , 2010, Sturman et al ။ , 2010, Andrzejewski et al ။ , 2011, လှံ, 2011, Burton နဲ့ဖလက်ချာ, 2012 နှင့် Naneix et al ။ , 2012) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မြီးကောင်ပေါက်လျင်မြန်စွာ (ကရပ်တန့် signal ကိုအပြီးသင့်လျော်တဲ့တုံ့ပြန်မှုစတင်ရန်လျှော့နိုင်စွမ်းပြရှိမုနျကို et al ။ , 2013), DMS ၏တွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုအလားတူ (လင်းယုန်နှင့် Robbins, 2003).
ဆယ်ကျော်သက် DMS မတူဘဲ, DLS အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု၏ရှေ့မှောက်တွင်လျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးစဉ်အတွင်းလုပ်ရပ်များကနဦးတင်းကျပ်စွာရလဒ်ကိုကိုယ်စားပြုမှုဆက်စပ်နေကြသည်။ များလွန်းနေပြီးပြီးနောက်, သို့သော်, လုပ်ရပ်တွေကို (( "လေ့") လျော့နည်းရလဒ်ကိုကိုယ်စားပြုမှုလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ပိုပြီးအလိုအလျောက်ဖြစ်လာDickinson, 1985) ။ ဒီအလေ့အကျင့်သင်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်သော plasticity (DLS ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ယဉ် et al ။ , 2009, Balleine နှင့် O'Doherty, 2010 နှင့် ဆူး et al ။ , 2010), နှင့်လေ့အပြုအမူဖို့ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထံမှပြောင်းကုန်ပြီ DS အတွက် dopamine ဂီယာအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (Packard နဲ့အဖြူရောင်, 1991 နှင့် ဘီးလင်းနှင့် Everitt, 2008) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက် vs. ဆယ်ကျော်သက်အတွက်အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ကွဲလွဲဒေတာရှိပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက် (အနေနဲ့အရေးပေါ်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုတုံ့ပြန်ထိန်းညှိဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်တစ်ဦးစစ်ကူတန်ဖိုးတာဝန်အတွက်တိုးလာလေ့အပြုအမူကိုသရုပ်ပြNaneix et al ။ , 2012 နှင့် Hammerslag နှင့် Gulley, 2014) ။ လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လုပ်ငန်းတာဝန်ပြောင်းလဲတဲ့သတ်မှတ်ချက်အပေါ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်အမူအကျင့်ကျောမှုသို့မဟုတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်စေဘို့သက်သေအထောက်အထား (တာဝန်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ parameters အပေါ်အခြေခံပြီး, ရှိပါတယ်Leslie et al ။ , 2004, Newman ကနှင့် McGaughy, 2011 နှင့် Snyder et al ။ , 2014) ။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးတာဝန်များကိုတသမတ်တည်းမြီးကောင်ပေါက်များတွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပိုမိုအဆင့်ဆင့်လိုက်လျောဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲစံ Two-ရွေးချယ်မှု set ကိုထက် သာ. ကြီးမြတ်သိမြင်ဝန်လိုအပ်ပါတယ်ရာတစ်ဦးကလေးရွေးချယ်မှုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်တာဝန်, (အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထင်ရှားဂျွန်ဆင်နှင့် Wilbrecht, 2011) ။ ထို့အပြင်မကြာသေးမီကအချက်အလက်များအရဆုလာဘ်ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူအတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ် cue ၏ရှေ့တော်၌အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုတားဆီးဖို့သင်ယူပြီးနောက်, ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်, ပိုမိုလျင်မြန်စွာတစ် ဦး Pavlovian-conditioned လှုံ့ဆော်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အဖြစ် cue ဆည်းပူးကြောင်းပြသသည်။ ဤသည်ကဆယ်ကျော်သက်များသည်ယခင်အဓိကကျခဲ့သော cue ၏တန်ဖိုးကိုပုံမှန်ထိန်းညှိနိုင်ကြောင်းအကြံပြုသည် (ပုံမှန်အားဖြင့်ယခင်ကပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းမရှိသောအချက်ကိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းပါ ၀ င်သောပြောင်းပြန်လုပ်ငန်းနှင့်ကွဲပြားသည်) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် 10 s cue (light or tone) ကိုတင်ပြခဲ့ပြီး cued instrumental paradigm တွင်ကြွက်များအားလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့် cue လက္ခဏာပြောင်းလဲမှုကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်ဤစွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အစားအစာတောင့်ပေးပို့။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားမှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုကိုဤလုပ်ငန်းတွင်မတွေ့ရှိခဲ့ပါ (F(1,12) = .23, p = .64; n =7/ အသက်အရွယ်အုပ်စု; သဖန်းသီး။ 2) ။ ဒီစမ်းသပ်မှု၏ဒုတိယအဆင့်တွင်, ဆာပ cue ပုံမှန်အားဖြင့် 10 s Pavlovian cue သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ cue- ရလဒ်ဆက်ဆံရေးအတွက်အပြောင်းအလဲပြီးနောက်, မြီးကောင်ပေါက် cue စဉ်အတွင်းအစားအစာကျုံ့အတွက်သုံးစွဲအချိန်အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်, ဤ cue စဉ်အတွင်း Pavlovian ချဉ်းကပ်မှု၏ပိုမိုမြင့်မားရာခိုင်နှုန်းပြသခဲ့သည် (F(1,12) = 6.96, p = .023; သဖန်းသီး။ 2) ။ တစ်ထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုများတွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက် (ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု Pavlovian အေးစက်သင်ယူသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေဖို့အထွေထွေစွမ်းရည်အတွက်အသက်နှင့်ဆက်စပ်သောကွာခြားချက်နှင့်ဆက်စပ်သောမခံခဲ့ရကြောင်းညွှန်ပြ, တန်းတူမှုနှုန်းမှာဝတ္ထု cue မှ Pavlovian ချဉ်းကပ်ဝယ်ယူF(1,12) = .26, p = .62) ။ ထို့ကြောင့်ဤအချက်အလက်များအရ cue သည်ရပ်တန့်ခြင်းသို့မဟုတ်အချက်အချာကျသောအခြေအနေတွင်အချက်ပြခြင်းပြုသည့်အခါ cue - ရလဒ်ဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲများကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူများထက်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များကပိုမိုလျင်မြန်စွာဝယ်ယူနိုင်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်၏ဤလက္ခဏာသည်၎င်းအားအရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဦး နှောက်ထက်ယခင်ကအဓိကအချက်များသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်၏တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုများကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်သုတေသနပြုမှုသည်အစဉ်အလာအရပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုယေဘူယျအားဖြင့်အကြံပြုသည်။
(က) အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက် cue တင်ဆက်မှုအောက်ပါဆုလာဘ်တစ်ခုနျဆာပအရေးယူဆောင်ရွက်မှုဖျော်ဖြေဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။ (ခ) တူညီသော cue တစ်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မရှိတော့ဆက်ပြောပါတယ်သောဆုလာဘ်စဉ်အတွင်းတစ် Pavlovian cue မှပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့် cue ရပ်စဲအဖြစ်အမြဲကယ်နှုတ်ခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များပိုမိုလျင်မြန်စွာလူကြီးများထက် (ထို cue စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်ထားချက်အရအစားအစာကျင်းများတွင်သုံးစွဲအချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်) က cue တစ် Pavlovian တုံ့ပြန်မှုရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါအကျဉ်းချုံးဒေတာ (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်တွေကိုပိုပြီးပြင်သာပြောင်းသာလူကြီးများထက်ယခင်ကအဓိပ္ပါယ်ရှိသောခဲ့ကြသည်ရသောတွေကိုနှင့်ရလဒ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုဝှက်စေခြင်းငှါအကြံပြုရှိမုနျကို et al ။ , 2013; သဖန်းသီး။ 2), သို့မဟုတ်မြင့်မားသိမြင်ဝန်နှင့်အတူအခြေအနေများတွင် (ဂျွန်ဆင်နှင့် Wilbrecht, 2011) ။ ဆုလာဘ်-related ဖြစ်ရပ်များစဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက် DMS အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအဆိုပါ Hyper-response (Sturman နှင့် Moghaddam, 2012) (အမူအကျင့်မဟာဗျူဟာပြောင်းလဲပစ်ရန်ပိုမိုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါKimchi နှင့် Laubach, 2009) ။ ဒါဟာဒီဒေသလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ hypoactive လျှင်စောငျ့ရှောကျဖို့, လေ့အပြုအမူ၏သင်ယူမှုနှင့်စကားရပ်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်သောဆယ်ကျော်သက် DLS မှမှတ်တမ်းတင်ဖို့အကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်။ အပြုအမူရှာကြံလေ့မူးယစ်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်း (များ၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်သကဲ့သို့ Accelerated အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်း, စွဲလမ်းမြှင့်တင်ရန်အဆိုပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်Everitt et al ။ , 2008 နှင့် Hogarth et al ။ , 2013) ။ ထို့ကြောင့်အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ DS ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏ဖြစ်ပွားနေသောလေ့လာမှုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမူးယစ်ဆေးစွဲ၏သဘောအရဆိုလျှင်ဆီသို့အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံး DS နှင့် VS (အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်Cardinal က 2006, ရှိမုနျကို et al ။ , 2011, Kohno et al ။ , 2013 နှင့် Mitchell က et al ။ , 2014), အန္တရာယ်ကင်းဆုလာဘ်ကျော်အန္တရာယ်များများအတွက်ဦးစားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်။ အန္တရာယ်များအပြုအမူ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်အမာခံများဖြစ်ပြီး, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Bornovalova et al ။ , 2005 နှင့် Balogh et al ။ , 2013) ။ ထို့အပွငျအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ကြွက်မော်ဒယ်ကနေမကြာသေးခင်ကသက်သေအထောက်အထား (ဆယ်ကျော်သက်အတွက်အန္တရာယ်များအပြုအမူကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုခန့်မှန်းကြောင်းပြသMitchell က et al ။ , 2014), မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲအားနည်းချက်လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါအရာ (Adriani နှင့် Laviola, 2004, Merline et al ။ , 2004 နှင့် Doremus-Fitzwater et al ။ , 2010) ။ နှစ်ဦးစလုံး striatal ဒေသများတွင်လျှော့ချ dopamine အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကြွက်များတွင်အန္တရာယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီး, ရွေးချယ် dopamine agonists ဖြစ်စေ system သို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေး striatum သို့ဒေသခံပြုတ်ရည် (အန္တရာယ်များအပြုအမူလျော့ကျစေပါတယ်ရှိမုနျကို et al ။ , 2011 နှင့် Mitchell က et al ။ , 2014) ။ ထို့ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက် (DS အတွက်လျှော့ချ dopamine Response နှင့် TH စကားရပ်ကိုသရုပ်ပြMatthews က et al ။ , 2013), အရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်များအပြုအမူများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယန္တရားပေးနိုငျသညျ။ အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချလည်း (OFC အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုနဲ့ dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်Eshel et al ။ , 2007, ဗန် Leijenhorst et al ။ , 2010, ရှိမုနျကို et al ။ , 2011 နှင့် အိုနေးလ်နှင့် Schultz, 2013) ။ ဒါဟာ (OFC နှင့် DS နှစ်ဦးစလုံးအတွက် hyperactive ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်Sturman နှင့် Moghaddam, 2011b နှင့် Sturman နှင့် Moghaddam, 2012) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအလွန်အကျွံနှင့်ရံဖန်ရံခါ maladaptive အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ ဒီ circuitry ၏နောက်ထပ်လေ့လာမှု (စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များနှင့်စွဲ, schizophrenia နှင့်စိတ်ကျရောဂါအပါအဝင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထင်ရှားစွာပြကြောင်းအန္တရာယ်များအပြုအမူအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရောဂါများ၏အစောပိုင်းအဆင့်များအတွက်ကုထုံး options တွေကိုလိုက်လျောနိုင်Ludewig et al ။ , 2003, Bornovalova et al ။ , 2005 နှင့် တေလာ Tavares et al ။ , 2007).
2.3 ။ Ventral tegmental ဧရိယာ
Dopamine အာရုံခံ, ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင်ဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုအထူးသဖြင့်သူများ, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့, အသင်းအဖွဲ့များသင်ယူမှုနှင့်စွဲလမ်း၏ pathophysiology, ခံစားချက်မမှန်ခြင်း, schizophrenia (နဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ပညာရှိ Bozarth, 1985, Schultz, 1998, ပညာရှိ 2004, Sesack နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2010 နှင့် Howes et al ။ , 2012) ။ အဆိုပါ dopamine စနစ် (ဆယ်ကျော်သက်အမူအကျင့်များနှင့်နာမကျန်းအားနည်းချက်များအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးLuciana et al ။ , 2012, Matthews က et al ။ , 2013 နှင့် Niwa et al ။ , 2013), နှင့် dopamine ဂီယာနှင့် VTA လှုပ်ရှားမှု၏ရှုထောင့်လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားကြသည် (ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2011, McCutcheon et al ။ , 2012 နှင့် Matthews က et al ။ , 2013) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးလျှက် prefrontal cortex နဲ့ ventral striatum, တိုင်းဒေသကြီးများမှ VTA စီမံကိန်းတွင်အပြင်, dopamine အာရုံခံ။ Little ကလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘယ်လိုဆယ်ကျော်သက် VTA အာရုံခံဖြစ်စဉ်ကိုဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ရပ်များအကြောင်းကိုသို့သော်လူသိများသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင် VTA အာရုံခံထံမှ extracellular လှုပ်ရှားမှု၏မကြာမီကပဏာမအသံဖမ်း (ဤအာရုံခံအလားတူ Basal ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းရှိသည်နှင့်ဆက်စပ်တွေကိုဆုချတုံ့ပြန်ကွောငျးဖျောပွသကင်မ်နှင့် Moghaddam, 2012), နှင့်အလုပ်ဤသည်၌ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အကဲဖြတ်ရန်နှင့်အခြား, dopaminergic ဒေသများလိမ့်မည်ဟုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်။
2.4 ။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ circuitry အကျဉ်းချုပ်
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတိုးမြှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူ, အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, cue salience, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆုလာဘ်ရှာနှင့်အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အထက်အသေးစိတ်အမျှတစ်ခုတည်းယူနစ် electrophysiology ဖွယ်ရှိသည်ဤအပြုအမူသဘောထားတွေနဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။ မြီးကောင်ပေါက် (OFC နှင့် DS နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လူကြီးများမှဆွေမျိုးဆုချမှ Hyper-activation ကိုသရုပ်ပြသဖန်းသီး။ 3) ။ အဆိုပါ OFC တိုက်ရိုက် (နု OFC-DS ဆက်သွယ်မှုကိုလည်းထိုအစောင့်ကြည့်လေ့လာသက်ရောက်မှုအထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းအကြံပြုအနည်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ထဲမှာ, DS ဖို့မှန်းချက်ရဲ့Berendse et al ။ , 1992 နှင့် Reep et al ။ , 2003) ။ အဆိုပါ substantia nigra ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ Dopaminergic အာရုံခံလည်း (DS မှပရောဂျက်Voorn et al ။ , 2004), ဤအအာရုံခံနှင့်ထစ်အငေါ့ဆုလာဘ်-evoked လှုပ်ရှားမှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် DS ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ hyperactive အထောက်အကူပြုပေမည်။ စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့အောက်ပါ DS အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအဆိုပါလျှော့ချ dopamine efflux နောက်ထပ်စမ်းသပ်ချက်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ခြားနားချက်အတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်သောသော်လည်းထိုအအာရုံခံအမှန်ပင်, လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ hyperactive ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ substantia nigra ထံမှအပြင်းထန်ဆုံး dopaminergic input ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့ DLS အတွက်ဆုလာဘ်-evoked လှုပ်ရှားမှု, (Groenewegen, 2003 နှင့် Voorn et al ။ , 2004အမူအကျင့်အလေ့အထများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက်ကွဲပြားခြားနားသည်ကဲ့သို့) လည်း (အရွယ်ရောက်သူနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားထူးခြားဖွယ်ရှိသည်ဂျွန်ဆင်နှင့် Wilbrecht, 2011, Newman ကနှင့် McGaughy, 2011, ရှိမုနျကို et al ။ , 2013 နှင့် Snyder et al ။ , 2014).
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်တစ်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ဆုလာဘ် circuit ကို။ ဘုံ "ဆုလာဘ်ဆားကစ်" ၏ Connections ကိုအနက်ရောင်တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်များနှင့်နျူကလိယ accumbens (NAc), ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့် prefrontal cortex (mPFC) medial နေကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အနီတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်တစ်ဦးဖြည့်စွတ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့လမ်းကြောင်းခွဲခြားသတ်မှတ်။ (substantia nigra (SNc) မှပေါ်ထွန်းသော dorsal striatum (DS) မှ dopamine Project, ဆယ်ကျော်သက်အတွက် hypoactive ဖြစ်မည်အကြောင်းကျနော်တို့ကိုရှာဖွေMatthews က et al ။ , 2013) မြီးကောင်ပေါက်များ၏ orbitofrontal cortex (OFC) နှင့် DS အာရုံခံလူကြီးများ (နှိုင်းယှဉ် Hyper-တုံ့ပြန်မှုဆုချကြစဉ်Sturman နှင့် Moghaddam, 2011a, Sturman နှင့် Moghaddam, 2011b နှင့် Sturman နှင့် Moghaddam, 2012) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, NAc dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆုလာဘ်-evoked လှုပ်ရှားမှုနှင့်, ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် dopamine အာရုံခံ၏အခြေခံပစ်ခတ်ရန် (အရွယ်ရောက်သူနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားနှိုင်းယှဉ်များမှာကင်မ်နှင့် Moghaddam, 2012 နှင့် Matthews က et al ။ , 2013).
စိတ်ဝင်စားစရာမရှိသိသိသာသာအသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှု (VS ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအပြုအမူဆိုင်ရာအားနည်းချက်များ၏မော်ဒယ်များအတွက်ထင်ရှားတဲ့အချက်ဖြစ်ခြင်းရှိနေသော်လည်း NAc ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်Ernst et al ။ , 2009 နှင့် Geier et al ။ , 2010) ။ အသက်အရွယ်အုပ်စုများအကြားဒါဟာအလားတူအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု NAc အတွက်မူးယစ်ဆေး-evoked dopamine efflux မအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောကွဲပြားခြားနားမှု၏အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် (Frantz et al ။ , 2007 နှင့် Matthews က et al ။ , 2013), NAc အတွက် dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်နှင့် ပတ်သက်. လေ့လာမှုများ (ပဍိပက္ခနေကြတယ်ပေမယ့်Teicher et al ။ , 1995 နှင့် Tarazi နှင့် Baldessarini, 2000) ။ NAc ဆုလာဘ်-အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု၏မရှိခြင်းအမူအကျင့်များနှင့် psychopathology အားနည်းချက်များပေါ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆယ်ကျော်သက် NAc ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါပါဘူး; မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းစိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သို့သော်လေ့လာတွေ့ရှိကွဲပြားခြားနားမှု (လှံ, 2011) NAc ထက် သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိ DS နှင့် PFC ဒေသများတွင်အလုပ်လုပ်တဲ့အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုကနေပျေါပေါကျနိုငျသညျ။ စုပေါင်းဤတွေ့ရှိချက် (အစဉ်အလာဟာဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry မြီးကောင်ပေါက်အဘို့ပြုပြင်သင့်ကြောင်းအကြံပြုသဖန်းသီး။ 3).
ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်အနာဂတ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုသုတေသနပြုအကြောင်းကြား: တွေကိုခန့်မှန်းထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်အဖြစ်အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုမှ (1) အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်၏အချိန်န်းကျင်တွင် neuron အပြောင်းအလဲနဲ့ထက်ထိခိုက်, သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းထိခိုက်နစ်နာဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်တစ်ဦးအာရုံလှုံ့ဆျောမှုပုံမမှန်စောစောအားနည်းချက်များအတွက်စံပြ biomarker များကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ (2) ကြံ့ခိုင်အာရုံခံတုံ့ပြန်မှုပုံမှန်အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်မထားသောကြောင့်ဒေသများတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏ dynamic circuitry ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူမော်ဒယ်များထက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်နှင့်ဂန္ထဝင်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်မထားသောကြောင့် cortical နှင့် Basal ganglia ဒေသများပါဝင်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သော DS အဖြစ်ဒေသများအပေါ်အနာဂတ်အလေးပေးသည်အလွန်ဒီပြောင်းလဲနေသော circuitry ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာနှင့်မှာ-အန္တရာယ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရောဂါအားနည်းချက်မှ၎င်း၏အလှူငွေတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ဤလုပ်ငန်းကထောက်ခံခဲ့သည် DA ၁၀၅၉ (NWS) နှင့် MH048404-23 (BM).
Adriani နှင့် Laviola, 2003
ဒဗလျူ Adriani, G. အ Laviola
Impulse နှင့် D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူလျှော့သောအရပ်အေးစက်၏ elevated အဆင့်ဆင့်: ကြွက်တွေမှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှစ်ခုအမူအကျင့် features တွေ
ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 117 (2003), စစ။ 695-703
HC Brenhouse, KC Sonntag, SL Andersen က
ဂျေ neuroscience ။ , 28 (2008), စစ။ 2375-2382
Brenhouse နှင့် Andersen က, 2008
HC Brenhouse, SL Andersen က
လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့် adoelscent ကြွက်များတွင်ကင်းသောအခြေအနေများအရပျကို preference ကို၏အားကောင်း reinstatement နှောင့်နှေး
ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 122 (2008), စစ။ 460-465
Bornovalova et al ။ , 2005
MA Bornovalova, SB သမီး, GD ဟာနန်ဒက်ဇ်, JB- Richards, CW Lejuez
တစ်ဦးလူနေအိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုအစီအစဉ်တွင်အက်ကွဲကိုကင်းများ၏မူလတန်းအသုံးပြုသူများနှင့်ဘိန်းဖြူအဓိကအသုံးပြုသူများအကြား Impulse နှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ propensity အတွက်ကွာခြားချက်များ
Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ , 13 (2005), စစ။ 311-318
Bolanos et al ။ , 1998
, CA Bolanos, SJ Glatt, ဃ Jackson က
periadolescent ကြွက်များတွင် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများမှ Subsensitivity: တစ်အပြုအမူနှင့် neurochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ဦးနှောက် Res ။ dev ။ ဦးနှောက် Res ။ , 111 (1998), စစ။ 25-33
PDF ဖိုင် (752 K)
ဂျေ neuroscience ။ , 24 (2004), စစ။ 1793-1802
ဘာလင် et al ။ , 2004
HA ဘာလင်, ET Rolls, U. Kischka
orbitofrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာအတွက် Impulse, အချိန်အမြင်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အားဖြည့် sensitivity ကို
ဦးနှောက်, 127 (2004), စစ။ 1108-1126
Berendse et al ။ , 1992
ကြွက်များတွင် prefrontal corticostriatal စီမံကိန်း၏ ventral striatal အခန်းနှင့်အတူမြေမျက်နှာသွင်ပြင်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုး
ဂျေ comp ။ Neurol ။ , 316 (1992), စစ။ 314-347
ဘီးလင်းနှင့် Everitt, 2008
ဃဘီးလင်း, BJ Everitt
ကိုကင်းရှာကြံအလေ့အထဟာ dorsal striatum အတူ ventral ချိတ်ဆက် dopamine-မှီခိုအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မူတည်
အာရုံခံဆဲလျ, 57 (2008), စစ။ 432-441
PDF ဖိုင် (1056 K)
Bechara et al ။ , 2001
A. အ Bechara, အက်စ် Dolan, N. Denburg, အေမင်ဒရယ်, SW Anderson တို့, PE နေသန်
အရက်၌ထင်ရှားအလုပ်မဖြစ် ventromedial prefrontal cortex ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုငွေပြမှု, နှင့်လှုံ့ဆော်အလွဲသုံးစားပြုသူများ
Neuropsychologia, 39 (2001), စစ။ 376-389
PDF ဖိုင် (205 K)
Balogh et al ။ , 2013
ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ ,2(2013), စစ။ 1-9
Balleine et al ။ , 2011
BW Balleine, ကယ် Leung, SB Ostlund
အဆိုပါ orbitofrontal cortex, ခန့်မှန်းတန်ဖိုးနှင့်ရွေးချယ်မှု
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1239 (2011), စစ။ 43-50
Balleine et al ။ , 2007
ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက် dorsal striatum ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ
ဂျေ neuroscience ။ , 27 (2007), စစ။ 8161-8165
Balleine နှင့် O'Doherty, 2010
အရေးယူထိန်းချုပ်လူ့ခြင်းနှင့်ကြွက် homologies: ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်လေ့လုပ်ဆောင်ချက် corticostriatal ဆုံးအဖွတျ
Neuropsychopharmacol ဟာ Off .: ။ Publ ။ နံနက်။ Coll ။ Neuropsychopharmacol ။ , 35 (2010), စစ။ 48-69
Anker et al ။ , 2009
JJ Anker, JL ပယ်ရီ, LA က Gliddon, ME ကာရိုး
Impulse ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏တင်းမာမှုလျှော့ချခန့်မှန်း
Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ , 93 (2009), စစ။ 343-348
PDF ဖိုင် (292 K)
Andrzejewski et al ။ , 2011
ME Andrzejewski, TL Schochet, EC အ Feit, R. Harris က, BL Mc Kee, AE ကယ်လီ
အော်ပရေတာသင်ယူမှု, မျိုးသုဉ်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတားစီး Paradigm အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်အပြုအမူတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်
ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 125 (2011), စစ။ 93-105
Andersen က et al ။ , 2000
Thompson က, အမ် Rutstein, JC Hostetter, MH Teicher ကို AT SL Andersen က,
ကြွက်များတွင် periadolescent ကာလအတွင်း prefrontal cortex အတွက် Dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကို
synapses, 37 (2000), စစ။ 167-169
SL Andersen က, NL Dumont, MH Teicher
(+/-) က dopamine ပေါင်းစပ်တားစီးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု - 7-Oh-DPAT
Naunyn-Schmiedeberg ရဲ့ Arch ။ Pharmacol ။ , 356 (1997), စစ။ 173-181
Ahn et al ။ , 2011
W.-Y. Ahn, O. Rass, DJ သမား Fridberg, AJ Bishara, JK Forsyth, အေ Breier, JR Busemeyer, WP Hetrick, AR Bolbecker, BF O'Donnell
စိတ်ကြွရောဂါနှင့် schizophrenia နှင့်အတူလူနာအတွက်ဆုလာဘ်၏ယာယီလျှော့
ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ , 120 (2011), စစ။ 911-921
Adriani နှင့် Laviola, 2004
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ကြွက်မော်ဒယ်အတွက် psychopathology နှင့်ကုထုံးနည်းဗျူဟာအားနည်းချက်၏ Windows ကို
ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ , 15 (2004), စစ။ 341-352
Brenhouse et al ။ , 2010
HC Brenhouse, K. Dumais, SL Andersen က
မှိုင်း၏ salience မြှင့်တင်ခြင်း: အမူအကျင့်များနှင့် pharmacological မဟာဗျူဟာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-cue အသင်းအဖွဲ့များ၏မျိုးသုဉ်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်
neuroscience, 169 (2010), စစ။ 628-636
PDF ဖိုင် (959 K)
ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ B က: Biol ။ သိပ္ပံ။ , 363 (2008), စစ။ 3125-3135
Eshel et al ။ , 2007
N. Eshel, EE နယ်လ်ဆင်, ဂျေတိုနီဘလဲ, DS ထင်းရူး, အမ် Ernst
လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ရေး၏အာရုံကြောအလွှာ: အ ventrolateral prefrontal ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် anterior cingulate cortical
Neuropsychologia, 45 (2007), စစ။ 1270-1279
PDF ဖိုင် (626 K)
Ernst et al ။ , 2009
အမ် Ernst, RD Romeo, SL Andersen က
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Neurobiology: တစ်အာရုံကြောစနစ်များမော်ဒယ်သို့ပြတင်းပေါက်
Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ , 93 (2009), စစ။ 199-211
PDF ဖိုင် (3566 K)
Ernst et al ။ , 2006
အမ် Ernst, DS ထင်းရူး, အမ် Hardin
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူများ၏ neurobiology ၏ Triadic မော်ဒယ်
Psychol ။ Med ။ , 36 (2006), စစ။ 299-312
ဆယ်ကျော်သက်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏လေ့လာမှုများအတွက် triadic မော်ဒယ်ရှုထောင့်
ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်။ , 89 (2014), စစ။ 104-111
PDF ဖိုင် (765 K)
လင်းယုန်နှင့် Robbins, 2003
DM လင်းယုန်, TW Robbins
တစ်မှတ်တိုင်-signal ကိုတုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်ဖျော်ဖြေကြွက်များတွင် Inhibitory ထိန်းချုပ်မှု: အ medial striatum ၏တွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများနှင့် D-စိတ်ကြွဆေး
ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 117 (2003), စစ။ 1302-1317
Doremus-Fitzwater et al ။ , 2012
TL Doremus-Fitzwater, အမ် Barretto, LP သို့လှံ
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Sprague-Dawley ကြွက်တို့တွင်အ Impulse အတွက်ခေတ်-related ကွဲပြားခြားနားမှု
ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 126 (2012), စစ။ 735-741
Doremus-Fitzwater et al ။ , 2010
TL Doremus-Fitzwater, EI Varlinskaya, LP သို့လှံ
ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်။ , 72 (2010), စစ။ 114-123
PDF ဖိုင် (267 K)
ဒိုဟာဆီ et al ။ , 2013
JM ဒိုဟာဆီ, BM ကွတ်, KJ Frantz
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်နေဖြင့်ဘိန်းဖြူ-ရှာကြံပြီးနောက်အတင်းအကျပ် abstinence အတွက် prefrontal cortex တစ်အခန်းကဏ္ဍ
Neuropsychopharmacol ဟာ Off .: ။ Publ ။ နံနက်။ Coll ။ Neuropsychopharmacol ။ , 38 (2013), စစ။ 446-454
A. အ Dickinson
ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ SER ။ B က: Biol ။ သိပ္ပံ။ , 308 (1985), စစ။ 67-78
က de ကျေး, 2009
အိပ်ချ်က de ကျေး
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တစ်ပစ်မှတ်နှင့်အကျိုးဆက်အဖြစ် Impulse: နောက်ခံဖြစ်စဉ်များ၏သုံးသပ်ချက်
စှဲလမျးသူ။ Biol ။ , 14 (2009), စစ။ 22-31
Cooper ကနှင့် Knutson, 2008
JC Cooper က, ခ Knutson
valence နှင့် salience နျူကလိယအထောက်အကူပြု activation accumbens
NeuroImage, 39 (2008), စစ။ 538-547
Churchland et al ။ , 2010
MM Churchland, et al ။
တစ်ကျယ်ပြန့် cortical ဖြစ်ရပ်ဆန်း: stimulus စတင်ခြင်းအာရုံကြောအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ quenches
နတ်။ neuroscience ။ , 13 (2010), စစ။ 369-378
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1124 (2008), စစ။ 111-126
Cardinal က 2006
အာရုံကြော Netw ။ , 19 (2006), စစ။ 1277-1301
PDF ဖိုင် (1390 K)
Cao et al ။ , 2007
ဂျေ Cao, အက်စ် Lotfipour, အရှေ့တောင် Loughlin, FM ရေ Leslie
Neuropsychopharmacol ဟာ Off .: ။ Publ ။ နံနက်။ Coll ။ Neuropsychopharmacol ။ , 32 (2007), စစ။ 2279-2289
G. အ Buzsaki
အာရုံခံ ensembles ၏အကြီးစားအသံဖမ်း
နတ်။ neuroscience ။ ,7(2004), စစ။ 446-451
Burton နဲ့ဖလက်ချာ, 2012
CL Burton, PJ ဖလက်ချာ
ကြွက်များတွင်ထကြွလွယ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်ခေတ်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှု: dopamine နဲ့အချိုမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို
ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ , 230 (2012), စစ။ 21-33
PDF ဖိုင် (1819 K)
Burgos-Robles et al ။ , 2013
A. အ Burgos-Robles, အိပ်ချ် Bravo-Rivera, GJ Quirk
Prelimbic နှင့် infralimbic အာရုံခံအစာစားချင်စိတ်ဆာပအပြုအမူများကွဲပြားရှုထောင့်အချက်ပြ
PLOS ONE, 8 (2013), p ။ e57575
Flagel et al ။ , 2011
SB Flagel, JJ Clark က, TE ရော်ဘင်ဆင်, အယ်လ် Mayo အဘိဓါန်, အေ Czuj, ဗြဲ Willuhn,, CA Akers, SM ကလင်တန်, Pem Phillips က, အိပ်ချ် Akil
လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုအတွက် dopamine များအတွက်တစ်ဦးကရွေးချယ်အခန်းကဏ္ဍ
သဘာဝတရား, 469 (2011), စစ။ 53-57
Juckel et al ။ , 2012
G. အ Juckel, အီး Friedel, အမ် Koslowski, အိပ်ချ် Witthaus, အက်စ် Ozgurdal, Y. Gudlowski, ခ Knutson, ဂျေ Wrase, အမ် Brune, အေ Heinz, အက်ဖ် Schlagenhauf
schizophrenia များအတွက် ultra-high အန္တရာယ်နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း Ventral striatal activation
Neuropsychobiology, 66 (2012), စစ။ 50-56
ဂျွန်ဆင်နှင့် Wilbrecht, 2011
C. ဂျွန်ဆင်, အယ်လ် Wilbrecht
Juvenile ကြွက်လူကြီးများထက်မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူမှုအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြသ
dev ။ သိမြင်မှု။ neuroscience ။ , 1 (2011), စစ။ 540-551
PDF ဖိုင် (1169 K)
Howes et al ။ , 2012
OD Howes, ဂျေ Kambeitz, အီး Kim က, ဃ Stahl, အမ် Slifstein, အေဗြ Dargham, အက်စ် Kapur
အဆိုပါ schizophrenia အတွက် dopamine ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏သဘောသဘာဝနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဒီကုသမှုများအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်: ပုံရိပ်လေ့လာမှု Meta-analysis သည်
Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု, 69 (2012), စစ။ 776-786
Horga နှင့်ဗြ Dargham, 2014
G. အ Horga, အေဗြ Dargham
အဆိုပါ striatum နှင့် dopamine: schizophrenia များအတွက်အန္တရာယ်တစ်ခုလမ်းဆုံ
ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 71 (2014), စစ။ 489-491
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1282 (2013), စစ။ 12-24
ဟတ် et al ။ , 2014
G. အဟတ်, ကယ် Leung, BW Balleine
Dorsal နှင့် ventral စီး: ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် striatal ငျဒသေ၏ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ
Neurobiol ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ , 108 (2014), စစ။ 104-118
PDF ဖိုင် (3427 K)
Hammerslag နှင့် Gulley, 2014
dev ။ Psychobiol ။ , 56 (2014), စစ။ 611-621
အစိမ်းရောင် et al ။ , 1994
အယ်လ်အစိမ်းရောင်, AF Fry, ဂျေ Myerson
နှောင့်နှေးဆုလာဘ်၏အထူးလျှော့စျေး: တစ်ဘဝကို-span နှိုင်းယှဉ်
Psychol ။ သိပ္ပံ။ ,5(1994), စစ။ 33-36
အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏ cellular အခြေခံ
အာရုံခံဆဲလျ, 14 (1995), စစ။ 477-485
PDF ဖိုင် (894 K)
Gladwin et al ။ , 2011
TE Gladwin, ခ Figner, EA ၏ Crone, RW Wiers
dev ။ သိမြင်မှု။ neuroscience ။ , 1 (2011), စစ။ 364-376
PDF ဖိုင် (650 K)
Gittis နှင့် Kreitzer, 2012
AH Gittis, AC အ Kreitzer
Striatal microcircuitry နှင့်လှုပ်ရှားမှုပုံမမှန်
ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ , 35 (2012), စစ။ 557-564
PDF ဖိုင် (770 K)
Cereb ။ cortex, 20 (2010), စစ။ 1613-1629
Garavan နှင့်ရဲရငျ့စှာပွော, 2005
အိပ်ချ် Garavan, JC ရဲရငျ့စှာပွော
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့ Neurocognitive ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို
ခေတ်ရေစီးကြောင်းသိမြင်မှု။ သိပ္ပံ။ ,9(2005), စစ။ 195-201
PDF ဖိုင် (157 K)
ဂျေ neuroscience ။ , 26 (2006), စစ။ 6885-6892
အဆိုပါ prefrontal cortex - တစ်ဦးမွမ်းမံခြင်း: အချိန်အနှစ်သာရသည်
အာရုံခံဆဲလျ, 30 (2001), စစ။ 319-333
PDF ဖိုင် (1382 K)
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ ,9(2005), စစ။ 474-480
တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ ,4(2010)
Frantz et al ။ , 2007
periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်းရန်အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical တုံ့ပြန်မှု
Neuropsychopharmacol ဟာ Off .: ။ Publ ။ နံနက်။ Coll ။ Neuropsychopharmacol ။ , 32 (2007), စစ။ 625-637
Kalivas နှင့် Volkow, 2005
နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 162 (2005), စစ။ 1403-1413
မစ်ချယ်နှင့် Potenza, 2014
Mitchell က, MN Potenza MR
စွဲနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ: Impulse နှင့်ဆက်စပ် Construction
Curr ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ rep ။ , 1 (2014), စစ။ 1-12
Merline et al ။ , 2004
AC အ Merline, ညနေ O'Malley, je Schulenberg, JG Bachman, ld Johnston
အရွယ်ရောက်သူအသက် 35 နှစ်ပေါင်းကြားတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း: ပျံ့နှံ့, လူကြီးခန့်မှန်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
နံနက်။ ဂျေပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, 94 (2004), စစ။ 96-102
Mendez et al ။ , 2010
အိုဝါ Mendez, ကဘရှိမုန် N. ဟတ်, MR မစ္စတာမစ်ချဲလ်, JR Nation, PJ Wellman, ခ Setlow
ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 124 (2010), စစ။ 470-477
McCutcheon et al ။ , 2012
je McCutcheon, KL Conrad, SB Carr က, ka Ford ကား, DS McGehee, အမ် Marinelli
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာမီးအတွက် Dopamine အာရုံခံပိုမြန်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်လူကြီးများထက်
ဂျေ Neurophysiol ။ , 108 (2012), စစ။ 1620-1630
အမ် Matthews, C. Bondi, GE ကတောရက်စ်, ခ Moghaddam
Neuropsychopharmacology, 38 (2013), စစ။ 1344-1351
Mathews နှင့်မက်ကော်မစ်, 2012
IZ Mathews, CM မက်ကော်မစ်
ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုအတွက် medial prefrontal cortex dopamine ၏အခန်းက္ပ: locomotor လှုပ်ရှားမှု dopaminergic ligands ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် mPFC ထိုးပြီးနောက်
dev ။ Neurobiol ။ , 72 (2012), စစ။ 1415-1421
Magno et al ။ , 2006
အီး Magno, JJ Foxe, အက်စ် Molholm, ih Robertson ကအိပ်ချ် Garavan
အဆိုပါ anterior cingulate နှင့်အမှားရှောင်ရှားခြင်း
ဂျေ neuroscience ။ , 26 (2006), စစ။ 4769-4773
Lynd-Balta နှင့် Haber, 1994
အီး Lynd-Balta, SN Haber
အဆိုပါမျောက်အတွက် striatum မှ midbrain စီမံကိန်း၏အဖှဲ့အစညျး: ventral striatum နှိုင်းယှဉ် sensorimotor-related striatum
neuroscience, 59 (1994), စစ။ 625-640
PDF ဖိုင် (4360 K)
Ludewig et al ။ , 2003
K. Ludewig, အမတ် Paulus, FX Vollenweider
လိုငွေပြမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏အမူအကျင့် dysregulation ပေမယ် nondeficit မဟုတ် schizophrenia လူနာ
စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ , 119 (2003), စစ။ 293-306
PDF ဖိုင် (188 K)
Luciana et al ။ , 2012
အမ် Luciana, ဃ Wahlstrom, ဖြစ်မှုပေါ်တာ PF Collins
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏ Dopaminergic မော်ဂျူ: အချက်ပြများတွင်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် Self-စည်းမျဉ်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်
dev ။ Psychol ။ , 48 (2012), စစ။ 844-861
Leslie et al ။ , 2004
FM ရေ Leslie, အရှေ့တောင် Loughlin, R. ဝမ်, အယ်လ်ဖာရက်, အက်စ် Lotfipour, JD Belluzzia
forebrain လှုံ့ဆော်တုန့်ပြန်၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဖှံ့ဖွိုးတိုး: တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1021 (2004), စစ။ 148-159
Kreitzer နှင့် Malenka, 2008
AC အ Kreitzer, RC Malenka
Striatal plasticity နှင့် Basal ganglia circuit ကို function ကို
အာရုံခံဆဲလျ, 60 (2008), စစ။ 543-554
PDF ဖိုင် (536 K)
Kota et al ။ , 2011
ဃ Kota, အက်စ် Sanjakdar, MJ Marks, O. Khabour, K. Alzoubi, MI Damaj
ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ Pharmacol ။ , 82 (2011), စစ။ 1008-1014
PDF ဖိုင် (722 K)
Kohno et al ။ , 2013
မော်ဂန်, MA Mandelkern, ED လန်ဒန်ကို AT အမ် Kohno, DG Ghahremani, Am Morales, CL Robertson က, K. Ishibashi,
စွန့်စားမှု-ယူပြီးအပြုအမူ: dopamine D2 / D3 receptors, တုံ့ပြန်ချက်များနှင့် frontolimbic လှုပ်ရှားမှု
Cereb ။ cortex (2013) ကြိုတင် Access ကိုသြဂုတ်လ 21, 2013 ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ
Kimchi et al ။ , 2009
EY Kimchi, MM Torregrossa, JR တေလာ, အမ် Laubach
အဆိုပါ dorsal striatum အတွက်နျဆာပသင်ယူမှု၏အာရုံခံဆက်စပ်မှု
ဂျေ Neurophysiol ။ , 102 (2009), စစ။ 475-489
Kimchi နှင့် Laubach, 2009
EY Kimchi, အမ် Laubach
အဆိုပါ medial striatum ခြင်းဖြင့်အရေးယူရွေးချယ်ရေး၏ dynamic encoding က
ဂျေ neuroscience ။ , 29 (2009), စစ။ 3148-3159
ကင်မ်နှင့် Moghaddam, 2012
Y. Kim က, ခ Moghaddam
အာရုံကြောသိပ္ပံ abstraction 704.11 / DDD73 များအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း (2012)
Killcross နှင့် Coutureau, 2003
အက်စ် Killcross, အီး Coutureau
ကြွက်များ၏ medial prefrontal cortex အတွက်လုပ်ရပ်များနှင့်အလေ့အထများ၏ညှိနှိုင်းရေး
Cereb ။ cortex, 13 (2003), စစ။ 400-408
အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု၏ Ventral striatal ထိန်းချုပ်မှု: စားသုံးမိအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှု
neuroscience ။ biobehav ။ ဗျာ, 27 (2004), စစ။ 765-776
PDF ဖိုင် (290 K)
Mitchell က et al ။ , 2014
မစ်ချယ်, VG Weiss, BS ဘေရက်စ်, ဃမော်ဂန်, JL Bizon, ခ Setlow MR
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့် striatal dopamine အချက်ပြ
Neuropsychopharmacol ဟာ Off .: ။ Publ ။ နံနက်။ Coll ။ Neuropsychopharmacol ။ , 39 (2014), စစ။ 955-962
Roesch နှင့် Olson, 2005
Roesch, CR Olson MR
မျောက် orbitofrontal cortex အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်
ဂျေ Neurophysiol ။ , 94 (2005), စစ။ 2457-2471
ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2011
DL ရော်ဘင်ဆင်, DL Zitzman, KJ Smith က LP သို့လှံ
အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်အစာရှောင်ခြင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များ
neuroscience, 176 (2011), စစ။ 296-307
PDF ဖိုင် (2587 K)
Robbins နှင့် Everitt, 1996
ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ Neurobehavioural ယန္တရားများ
Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ ,6(1996), စစ။ 228-236
PDF ဖိုင် (1370 K)
Robbins နှင့် Everitt, 1992
အဆိုပါ dorsal နှင့် ventral striatum အတွက် dopamine ၏ Functions များ
seminal ။ neuroscience ။ ,4(1992), စစ။ 119-127
PDF ဖိုင် (854 K)
Reep et al ။ , 2003
RL Reep, JL Cheatwood, ဖက်စပ် Corwin
The Associated striatum: ကြွက်များတွင် dorsocentral striatum မှ cortical စီမံကိန်း၏အဖှဲ့အစညျး
ဂျေ comp ။ Neurol ။ , 467 (2003), စစ။ 271-292
အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖို့ medial prefrontal cortex, orbitofrontal cortex နှင့် dorsomedial striatum ၏ပံ့ပိုးမှုများ
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1121 (2007), စစ။ 355-375
limbic နှင့် visceral အဆောက်အဦများနှင့်အတူသီးခြားဆက်သွယ်မှုများနှင့်အခြား cortical ဒေသများ ဆက်စပ်. အတွက် Orbital cortex ၏အဓိပ္ပာယ်
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1121 (2007), စစ။ 54-71
Pezze et al ။ , 2014
အမ် Pezze, အက်စ် McGarrity, R. Mason ဆို, KC Fone, T. Bast
သိပ်သိပ်နည်းနည်းနှင့်: medial prefrontal cortex အကြောင်းမရှိ Attention Deficit ၏ hypoactivation နှင့် disinhibition
ဂျေ neuroscience ။ , 34 (2014), စစ။ 7931-7946
ပီတာ et al ။ , 2008
ဂျေပီတာ, RT ကို LaLumiere, PW Kalivas
Infralimbic prefrontal cortex ငြိမ်းအေးကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်းဟန့်တားဘို့တာဝန်ရှိသည်
ဂျေ neuroscience ။ , 28 (2008), စစ။ 6046-6053
ပယ်ရီ et al ။ , 2008
JL ပယ်ရီ, အရှေ့တောင်နယ်လ်ဆင်, ME ကာရိုး
IV ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ reinstatement ၏ဝယ်ယူတစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ် Impulse ရွေးချယ်မှု
Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ , 16 (2008), စစ။ 165-177
Packard နဲ့အဖြူရောင်, 1991
MG Packard, မိုင်ဖြူ
dopamine agonists ၏ intracerebral ဆေးထိုး posttraining အားဖြင့် hippocampus နှင့် caudate နျူကလိယမှတ်ဉာဏ်စနစ် Dissociation
ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 105 (1991), စစ။ 295-306
Packard နဲ့အဖြူရောင်, 1990
အဆိုပါ caudate နျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည်ရွေးချယ်သည့် radial ဝင်္အတွက်ရည်ညွှန်းမှတ်ဉာဏ်ဝယ်ယူအယှက်
ပြုမူနေ။ အာရုံကြော Biol ။ , 53 (1990), စစ။ 39-50
PDF ဖိုင် (687 K)
Packard နဲ့ Knowlton, 2002
အဆိုပါ Basal ganglia ၏သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို
Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ , 25 (2002), စစ။ 563-593
အိုနေးလ်နှင့် Schultz, 2013
အမ်အိုနေးလ်, ဒဗလျူ Schultz
orbitofrontal အာရုံခံအတွက်အန္တရာယ်ခန့်မှန်းအမှားနိုင်တဲ့ coding
ဂျေ neuroscience ။ , 33 (2013), စစ။ 15810-15814
Nolan et al ။ , 2011
Ka Nolan, ဃက D'အန်ဂျလို, MJ Hoptman
schizophrenia သို့မဟုတ် schizoaffective ရောဂါနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက် Impulse ၏ self-အစီရင်ခံစာနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအစီအမံ
စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ , 187 (2011), စစ။ 301-303
PDF ဖိုင် (138 K)
Niwa et al ။ , 2013
အမ် Niwa, အိပ်ချ် Jaaro-Peled, အက်စ် Tankou, အက်စ် Seshadri က T. Hikida, Y. Matsumoto, Ng Cascella, S.-i. Kano, N. Ozaki, T. Nabeshima, အေ Sawa
glucocorticoids မှတဆင့် dopaminergic အာရုံခံ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုထိန်းချုပ်မှု
သိပ္ပံ, 339 (2013), စစ။ 335-339
Newman ကနှင့် McGaughy, 2011
LA က Newman က, ဂျေ McGaughy
dev ။ Psychobiol ။ , 53 (2011), စစ။ 391-401
Naneix et al ။ , 2012
အက်ဖ် Naneix, AR Marchand, G. အ Di Scala, J.-R. Pape, အီး Coutureau
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူနှင့် dopaminergic စနစ်များစင်ပြိုင်ရငျ့
ဂျေ neuroscience ။ , 32 (2012), စစ။ 16223-16232
Moghaddam နှင့် Wood က, 2014
ခ Moghaddam, ဂျေ Wood က
ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 71 (2014), စစ။ 197-199
Roesch et al ။ , 2006
Roesch, AR တေလာ, G. အ Schoenbaum MR
orbitofrontal cortex အတွက်အချိန်လျှော့ဆုလာဘ်၏ encoding တန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုမှု၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ပါသည်
အာရုံခံဆဲလျ, 51 (2006), စစ။ 509-520
PDF ဖိုင် (602 K)
Sturman နှင့် Moghaddam, 2011b
လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူစဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက် prefrontal cortex ၏လျှော့ချအာရုံခံတားစီးနှင့်ညှိနှိုင်း
ဂျေ neuroscience ။ , 31 (2011), စစ။ 1471-1478
Sturman နှင့် Moghaddam, 2011a
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ neurobiology: ဦးနှောက်ဗိသုကာအတွက်အပြောင်းအလဲအလုပ်လုပ်တဲ့ဒိုင်းနမစ်နှင့်အမူအကျင့်လိုတဲ့သဘောထားကို
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 35 (2011), စစ။ 1704-1712
PDF ဖိုင် (514 K)
Stanis နှင့် Andersen က, 2014
ဂျေ Stanis, အက်စ် Andersen က
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချ: ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးများအတွက် Translational မူဘောင်
Psychopharmacology, 231 (2014), စစ။ 1437-1453
dev ။ သိမြင်မှု။ neuroscience ။ , 1 (2011), စစ။ 390-403
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 24 (2000), စစ။ 417-463
Sowell et al ။ , 1999
ER Sowell, ညနေ Thompson က, CJ Holmes, TL Jernigan, AW Toga
တိုကျရိုကျနှင့် striatal ဒေသများတွင် Post-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ရငျ့အဘို့အ Vivo သက်သေအထောက်အထားအတွက်
နတ်။ neuroscience ။ ,2(1999), စစ။ 859-861
Sonntag et al ။ , 2014
KC Sonntag, HC Brenhouse, N. Freund, BS Thompson က, အမ် Puhl, SL Andersen က
မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်: Over-expression ကိုလူကြီးများအတွက် prefrontal cortex တိုးမြင့်မားအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအတွက် D1 dopamine receptors ၏ viral
Psychopharmacology (ဘာလင်), 231 (2014), စစ။ 1615-1626
ဂျေသိမြင်မှု။ neuroscience ။ , 23 (2011), စစ။ 2123-2134
Snyder et al ။ , 2014
KP Snyder, အမ်ဘာရီ, RJ Valentino
Psychopharmacology (ဘာလင်) (2014)
ရှိမုနျကို et al ။ , 2013
ဘရှိမုန်က TA ဂရက်ဂိုရီ, ဂျေ Wood က, ခ Moghaddam
ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 127 (2013), စစ။ 23-32
ရှိမုနျကို et al ။ , 2011
ဘရှိမုန် KS Montgomery, BS ဘေရက်စ်, MR မစ္စတာမစ်ချဲလ်, CL LaSarge, အိုဝါ Mendez, C. Banuelos, CM Vokes, AB တေလာ, RP Haberman, JL Bizon, ခ Setlow
အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ Dopaminergic မော်ဂျူ
ဂျေ neuroscience ။ , 31 (2011), စစ။ 17460-17470
ရှိမုနျကို et al ။ , 2007
ဘရှိမုန်အိုဝါ Mendez, ခ Setlow
ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 121 (2007), စစ။ 543-549
Setlow et al ။ , 2009
ခ Setlow, အိုဝါ Mendez, MR Mitchell က, ကဘရှိမုနျကို
ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှု (အထူးလျှော့စျေးနှောင့်နှေး) တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်
ပြုမူနေ။ Pharm ။ , 20 (2009), စစ။ 380-389
Sesack နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2010
SR Sesack, AA ကိုကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း
Cortico-Basal ganglia ဆုလာဘ်ကွန်ယက်ကို: microcircuitry
Neuropsychopharmacology, 35 (2010), စစ။ 27-47
dopamine အာရုံခံ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ် signal ကို
ဂျေ Neurophysiol ။ , 80 (1998), စစ။ 1-27
Schramm-Sapyta et al ။ , 2009
NL Schramm-Sapyta, QD Walker က, JM Caster, ED Levin, CM Kuhn
Psychopharmacology (ဘာလင်), 206 (2009), စစ။ 1-21
Schoenbaum et al ။ , 2011
G. အ Schoenbaum, Y. Takahashi, TL ။ လျူ, MA McDannald
အဆိုပါ orbitofrontal cortex signal ကိုတနျဖိုးသလော
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ ,9(2011), စစ။ 1287-1299
Schochet et al ။ , 2005
TL Schochet, AE ကယ်လီ, CF Landry
ကို arc mRNA နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက် forebrain အတွက်နီကိုတင်းအားဖြင့်သွေးဆောင်သည်အခြား plasticity-related မျိုးဗီဇ၏ differential စကားရပ်
neuroscience, 135 (2005), စစ။ 285-297
PDF ဖိုင် (1079 K)
Rolls နှင့် Grabenhorst, 2008
ET Rolls, အက်ဖ် Grabenhorst
အဆိုပါ orbitofrontal cortex နဲ့ကျော်လွန်: ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းမှ
prog ။ Neurobiol ။ , 86 (2008), စစ။ 216-244
PDF ဖိုင် (1790 K)
proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 109 (2012), စစ။ 1719-1724
သစ်သား et al ။ , 2012
ဂျေ Wood က, Y. Kim က, ခ Moghaddam
psychotomimetic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းအားဖြင့် prefrontal cortex အကြီးစားအာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏နှောင့်အယှက်
ဂျေ neuroscience ။ , 32 (2012), စစ။ 3022-3031
ပညာရှိ Bozarth, 1985
RA ပညာရှိ, MA Bozarth
မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့် Euphoria ပီတိဦးနှောက်ယန္တရားများ
စိတ်ရောဂါ Med ။ ,3(1985), စစ။ 445-460
နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ ,5(2004), စစ။ 483-494
Winstanley et al ။ , 2010
, CA Winstanley, FD ဇေဘတို့ကို, အေ Bedard, K. ဖူ, ခလိုင်, C တို့သံမဏိ, AC အဝေါင်
အဆိုပါ orbitofrontal cortex ၏ Dopaminergic မော်ဂျူအာရုံစူးစိုက်မှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ငါးရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်ဖျော်ဖြေကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်ထကြွလွယ်သောအကျိုးသက်ရောက်
ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ , 210 (2010), စစ။ 263-272
PDF ဖိုင် (762 K)
, CA Winstanley
အဆိုပါ orbitofrontal cortex, Impulse နှင့်စွဲ: အအာရုံကြောမှာ orbitofrontal ကမောက်ကမဖြစ်မှုစကားတွေ, neurochemical နှင့်မော်လီကျူးအဆင့်အထိ
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 1121 (2007), စစ။ 639-655
Walker က et al ။ , 2010
QD Walker က, အရှေ့တောင်မောရစ်, AE Arrant, JM Nagel, အက်စ် Parylak, G. အ Zhou, JM Caster, CM Kuhn
Dopamine လွှာမှ inhibitors သော်လည်းမ dopamine လွှတ်ပေးရန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များထက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်မော်တာအပြုအမူနှင့် extracellular dopamine အတွက် သာ. ကွီးမွတျတိုးသွေးဆောင်
ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ , 335 (2010), စစ။ 124-132
Walker ကနှင့် Kuhn, 2008
QD Walker က, CM Kuhn
ကိုကင်းတိုးအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များထက် periadolescent ပိုမို dopamine လွှတ်ပေးရန်နှိုးဆွပေး
Neurotoxicol ။ Teratol ။ , 30 (2008), စစ။ 412-418
PDF ဖိုင် (562 K)
Voorn et al ။ , 2004
အဆိုပါ striatum ရဲ့ dorsal-ventral သွေးခွဲပေါ်မှာလှည့်ဖျားချပြီး
ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ , 27 (2004), စစ။ 468-474
PDF ဖိုင် (247 K)
Volz et al ။ , 2009
တီဂျေ Volz, SJ Farnsworth, SD က Rowley, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း Hanson, AE Fleckenstein
အသက်အရွယ်-မှီခို dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် vesicular monoamine Transporter-2 function ကိုများနှင့်စိတ်ကြွဆေး neurotoxicity ဘို့မိမိတို့ဂယက်ရိုက်
synapses, 63 (2009), စစ။ 147-151
အယ်လ်ဗန် Leijenhorst, ခ Gunther Moore, ZA ကအေဲနျဂြီက de Mack, SA Rombouts, ညနေ Westenberg, EA ၏ Crone
NeuroImage, 51 (2010), စစ။ 345-355
ဗန် Duuren et al ။ , 2007
အီးဗင် Duuren, FAN Escamez, RNJMA Joosten, R. Visser, AB Mulder, CMA Pennartz
ငါးအနံ့ olfactory ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတာဝန်စဉ်အတွင်းကြွက်များ၏ orbitofrontal cortex အတွက်ဆုလာဘ်ပြင်းအား၏အာရုံကြောနိုင်တဲ့ coding
Mem ကို။ , 14 (2007), စစ။ 446-456 Learn
ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ monoamine လမ်းကြောင်း၏ Stereotaxic မြေပုံ
Acta Physiol ။ Scand ။ ပျော့ပျောင်း။ , 367 (1971), စစ။ 1-48
Uhlhaas နှင့်အဆိုတော်, 2012
PJ Uhlhaas, ဒဗလျူအဆိုတော်
အာရုံခံဒိုင်းနမစ်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်: အလုပ်မဖြစ်အကြီးစားကွန်ရက်များများအတွက် Translational ပါရာဒိုင်းဆီသို့
အာရုံခံဆဲလျ, 75 (2012), စစ။ 963-980
PDF ဖိုင် (993 K)
ဆူး et al ။ , 2010
, CA စူးသောဆူး, အိပ်ချ် Atallah, အမ် Howe, Am Graybiel
လှုပ်ရှားမှု dorsolateral ပြောင်းလဲမှုများနှင့် dorsomedial striatal ကွင်း၏ differential ဒိုင်းနမစ်သင်ယူနေစဉ်အတွင်း
အာရုံခံဆဲလျ, 66 (2010), စစ။ 781-795
PDF ဖိုင် (2548 K)
တေလာ Tavares et al ။ , 2007
ဖက်စပ်တေလာ Tavares, အယ်လ် Clark က, DM Cannon, K. နိုင်ကြောင်း, WC Drevets, BJ Sahakian
unmedicated ရပ်များမှာတစ်ဘက်စွန်းစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိတ်ကြွ II ကိုစိတ်ကျရောဂါအတွက် neurocognitive function ကို၏ကွဲပြား profile များကို
Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 62 (2007), စစ။ 917-924
PDF ဖိုင် (275 K)
Tarazi et al ။ , 1998
ကြွက် caudate-putamen နှင့်နျူကလိယအတွက် dopamine နှင့် serotonin ပို့ဆောင်ရေး Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ septi accumbens
neuroscience ။ လက်တ။ , 254 (1998), စစ။ 21-24
PDF ဖိုင် (73 K)
Tarazi နှင့် Baldessarini, 2000
ကြွက် forebrain အတွက် dopamine D1, D2 နှင့် D4 receptors ၏နှိုင်းယှဉ် postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
int ။ ဂျေ Dev မှ။ neuroscience ။ , 18 (2000), စစ။ 29-37
PDF ဖိုင် (436 K)
Sturman et al ။ , 2010
DA Sturman, DR ကထပ်လောင်း, ခ Moghaddam
ပြုမူနေ။ neuroscience ။ , 124 (2010), စစ။ 16-25
ယဉ်များနှင့် Knowlton, 2004
နာရီယဉ်, BJ Knowlton
နေရာအရပ်များနှင့်တုန့်ပြန်သင်ယူမှုမှ striatal ငျဒသေပံ့ပိုးမှုများကိုသာ
Mem ကို။ , 11 (2004), စစ။ 459-463 Learn
ဇေဘတို့ကို et al ။ , 2010
အက်ဖ်ဇေဘတို့ကို, အက်စ် Floresco, C. Winstanley
ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုဖို့ orbitofrontal cortex ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ: Impulse ၏ Basal အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ interaction က, dopamine အချက်ပြများနှင့်ဆုလာဘ်-related တွေကို
Psychopharmacology, 211 (2010), စစ။ 87-98
ယဉ် et al ။ , 2009
နာရီယဉ်, SP Mulcare, MR Hilario, အီး Clouse, T. Holloway, MI Davis က, AC အ Hansson, DM မေတ္တာရှင်, RM ကော်စတာ
တစ်ဦးကျွမ်းကျင်မှုများဝယ်ယူခြင်းနှင့်စုစည်းစဉ်အတွင်း striatal ဆားကစ်၏ dynamic ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း
နတ်။ neuroscience ။ , 12 (2009), စစ။ 333-341
ယဉ် et al ။ , 2004
နာရီယဉ်, BJ Knowlton, BW Balleine
dorsolateral striatum ၏တွေ့ရှိရပါသည်ရလဒ်ကိုမျှော်မှန်းကိုထိန်းသိမ်းပေမယ့်ဆာပသင်ယူမှုအတွက်အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးနှောင့်အယှက်
အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ , 19 (2004), စစ။ 181-189
ရှိကြောင်း Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှအာရုံကြောသိပ္ပံဌာန, A210 Langley ခန်းမ, Pittsburgh, PA ဆိုပြီး 15260, ယူနိုက်တက်စတိတ်: မှာစာရေးဆရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့။ Tel .: + 1 412 624 2653; ဖက်စ်: + 1 412 624 9198 ။